About the next debate:What happens after the white cards expire? - DVB Multimedia Group
About the next debate:What happens after the white cards expire?
by DVBDadmin · March 25, 2015
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုရေးနဲ့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ယာယီသက်သေခံကတ် (White Card) ကိုင်ဆောင်သူတွေ အနေနဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့သဘောထားကို လွှတ်တော်က ဖော်ဖေါ်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ ထောက်ခံသူ ၃၂၈ဦး၊ ကန့်ကွက်သူ ၇၉ ဦးနဲ့ ကြားနေသူ ၁၉ ဦးရှိပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ၀ှိုက်ကဒ် ကိစ္စအပေါ် ဝေဖန်သံတွေဆူညံလာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် White Card ယာယီ သက်သေခံကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေပါ မဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းကို သမ္မတက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုလိုက်ပြီး နောက်တစ်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာပဲ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခြင်းနဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့ လက်မှတ်များအပ်နှံဖို့တွေပါတဲ့ ကြေညာချက်ကို သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရက်ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့ လက်မှတ်များအပ်နှံဖို့ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထား
ပါတယ်။ ဒီကြေငြာချက်ဟာ အစိုးရရဲ့ “မိုးပွင့် အထူးစီမံချက်” ရဲ့ တစ်စိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီက ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ဒါဟာ “၁၉၅၁ ခုနှစ် ပြည်ထောင် စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးနည်း ဥပဒေ ပုဒ်မ -၂(င)တွင် – ‘ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ်ဆိုသည်မှာ သက်သေခံကတ်ပြား အစား ထုတ်ပေး၍သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအပိုင်း အခြားအတွက်သာလျှင် အတည်ဖြစ်သောမည်သူဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုလိုသည်’” လို့ ဆို ထားပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံသားကတ်ပြားတစ်မျိုးမျိုး ရခွင့်ရှိသူတွေကို ထိုကတ်ပြားထုတ်ပေး
နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ယာယီသဘောထုတ်ပေးတဲ့ ကတ်ပြားတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဝှိုက်ဒ်ဟာ ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားကို ထုတ်ပေးရတဲ့ကဒ်ပြားမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပြီး လက်၇ှိ
၀ှိုက်ကဒ်ရရှိထားတဲ့သူတွေဟာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂ဝဝ၈ ကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေမှာ ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မှခွဲ (က) အရ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ဆန္ဒမဲပေးသူတွေအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားချက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ခုံရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုအပတ်မှာ “ အခုလို ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ရုတ်သိမ်းတာဟာ အဖြေဟုတ်ရဲ့လား” ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်နဲ့ လက်တလောပြဿနာတွေ၊ ၀ှိုက်ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေရဲ့ ရှေ့ဖြစ်လာနိုင်စရာတွေ၊ လူ့အခွင့်
ရေးရှု့ဒေါင့်ကအမြင်တွေအပါအ၀င်၊ နိုင်ငံတော် အချုပ်အချာအာဏာနဲ့ ၀ှိုက်ကဒ်အရေး စတာတွေအပေါ် မတူညီတဲ့အမြင်သဘောထားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအပတ် DVB Debate ကို ၂ ပွဲဆက်တိုက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ် ဒီကနေ့ လူမှု
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေ၇တဲ့ ဆူညံသံတွေအကြောင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာနေတဲ့ ကားသံ၊ ဟွန်းသံ၊ လော်စပီကာအသံ၊ မီးစက်သံ၊ ထုသံရိုက်သံတွေနဲ့ အနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အသေးစားအလတ်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကထွက်တဲ့ ဆူညံသံ စတဲ့ဆူညံသံ
တွေဟာ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀တွေအပေါ် တဖြည်းဖြည်း၇ိုက်ခတ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဆူညံသံတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ လူ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးက
သတိပြုမိလာဖို့ နဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ တိကျတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ကိုင်တွယ်မှုတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်
လာနေပါပြီ။ တစ်ဖတ်မှာလည်း များပြားလှတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပွဲတော် ယဉ်ကျေးမှု၊ အလှူခံလော်စပီကာယဉ်
ကျေးမှု သာရေး၊နာရေး စတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ဒီကနေ့ ဒီမိုရေစီစံနှုန်းပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ စောင့်
ထိန်းရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေအကြား ပွတ်တိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုအပတ်ရဲ့ ဒုတိယပွဲစဉ်မှာ “ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆူညံသံတွေ ညံလွန်းနေပြီလား” ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆူညံသံတွေကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြလဲ၊ ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်သူတွေမှာ အဓိကတာဝန်ရှိသလဲ ဆိုတာတွေအပေါ် ဒီဘိတ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Next story White Card: facts & figures
Previous story Highlights of the ‘Riot Control’ Debate